Imisa qof ayaa qaadatay dhalashada Sweden? | Somaliska
Sanadkii la soo dhaafay ee 2010 ayaa waxaa dhalasha Sweden dalbaday dad gaaraya 32 891 oo qof, iyadoo dhalasha la siiyay 20 864 oo qof. Dadka dhalashada Sweden qaatay ayaa inta badan ka soo jeeday wadamada Bosnia, Ruushka, Serbia, Iraq, Turkey, Poland, USA, Syria iyo Somalia.
Sanadka 2011 ayaa la filayaa tirada dadka dalbanaya dhalasha Sweden in ay siyaado, waxaa lagu qayaasayaa 37000 oo qof in ay dalbato baasaboorka Sweden. Guud ahaan ilaa sanadkii 2005 ilaa 2010 ayaa waxaa dhalashada Sweden qaatay dadka gaaraya 145 291.
Laanta Socdaalka (Migrationsverket) ayaa sanadkii la soo dhaafay bilowday in codsiyada dhalashada laga dalban karo qadka internetka.
Jimcale waxan ku waydiyey imisa sano ayay qofka ku dhadata inuu qato dhalashada swden
June 7, 2011 at 09:18
salaan sare jimcaale.. brother sidaan ognahey somaalida waxey ku qaadataa dhalashada 8sano,, inkastoo qowmiyadaha kale 5sano keliya ku qaadato ma jirtaa dariiqo loogu badbaadi karo 8daa sano, hadeey ahaan laheed inuu qofka keeno waraaqo dhalasho ah xiligii dowlada jirtey,oo kale, thanks
June 7, 2011 at 10:23
Ahmed sida caadada ah waa 8 sano. Khalid ma maqal in ay jirto wado qof Soomaali ah oo isagoo qaangaar ah soo galay Sweden uu kaga badbaadi karo 8da sano.
asc waxaan kula talinaayaa walaalahay in aanay ka dalban dhalashada khadka internetka sababtoo ah waa elecktronic waxa lagu dalbanaayao waxayna khaadanaysaa muddo waxaa ka sahlan marka aad gacantaada ku geysato sababtoo ah aniga ayaa ku dalbaday khadka internetka marka waan uga digayaa walaalahay inkastoo aan anigu hada helay ilaahayna iiga soo qaaday. wabilaahi tawfiiq
Jimaacale marka hore waan kusalamay iyo dhaman akhyaarta ku tixan ama soo booqato somaliska.com, jimaace waxan rabaa su ‘aal muhiim ah in aad iiga jawaabto hadii aad iga jaahil bixin karto adigoo mahadsan, qofkii wadankan asigoo 17 sano jir ah yimid kaligiis oo aan familkisa lasoconin meeqo sano ayu ku qaadan karaa dhalashada sweden????? mahadsanid.
hadii qofka isagoo da’ yar soo gala may ka duwantahay oo waqti ka gaaban taas ayow ku qaadana miyaa passka mise? Jimcaale
Runtii suaalahaas jawaabtooda oo sax ah ma hayo, mana arkin meel ay kaga hadleen laanta Socdaalka. Qiyaasteyda waxay tahay in uusan qofka Soomaaliga ah ee aan cadeyn karin aqoonsigiisa heleyn waqtiga oo laga yareeyo.
asc walaal jimcaale kadib waxaankuweydiinaa aniga o aanan qaadan baasaboorka dhalashada ilmaha ankudhalo iswiidhan imisa sano ayaa lagusiiyaa dhalashada.tack
Jimcale hadii laanta socdalka ama mangareshinka ama maxkamad sare looturjumo sualaha ay dadka kuweydinayan iyo jawabahaga wexey leyihin ninkan anaga odhan ayu naga badiya sharciga savanska wayo sualaha qar xata lamaweydin karo wasirka socdalka marka somalay jimcale ogada waa saxafi kaliya maha loyar ama shaqale lanta socdalka e isku xushoda
Asc mr. Jimcale salan sharaf ayaa kuu so diray marka hore arinta ah in la keeno passport somalia ah waxaa nagula xujeeye midkan lama rabo mid cusub ka ibsada safarada somalia hadaa mel kale ka kentiin waa jeebkine wax walbo wan kene hadane diidmo ayaa nala siiye maxey ku dhacday arintas
Asc walaalaha muslimiinta iyo bahda Somaliska.com, intaa kadib waxaan rabey in aan su’aal weydiiyo walaalkey Jimcaale hadii uu fursad hayo mahadsanid. Su’aal qofka haysta Resedokument pass som utfärdas enligt 1951 års Genèvekonventio, ma dadka haysta främlingspass ayuu lamid yahay mise wuu ku duwan yahay oo wuxuu ku qaadan karaa 5 år ?